‘डोली’मा क-कस्को भयो ‘झ्यानाकुटी झ्याई’ ? (भिडियो) « Ramailo छ
‘डोली’मा क-कस्को भयो ‘झ्यानाकुटी झ्याई’ ? (भिडियो)
फिल्म ‘डोली’ को ‘झ्यानाकुटी झ्याई’ बोलको गित सार्वजानिक भएको छ । लोक लयमा तयार भएको यो गितमा किशोर खतिवडा, पृथ्वीराज प्रसार्इं, प्रिया रिजाल, सानिया खान र संगिता नापित लगायतका कलाकारहरु फिचरिड. भएका छन् । भिडियो हेर्नुस् :
सार्वजानिक गितमा हरि उप्रेतीको शब्द रहेको छ भने संगीत तथा स्वरमा सि.डि बिजय अधिकारी र मेलिना राईको स्वर छ । श्री कृष्ण परियारले नृत्य निर्देशन गरेका छन् । समसामयिक बिषय बस्तु उठाएर निर्माण गरिएको डोली मा राज बहादुर सानेको लेखन तथा निर्देशन र निर्माण किरण नेपालीको रहेको छ ।
फिल्ममा अर्जुन गुरुंग, नविन रेग्मी, हिमवाला गौतम, दामोदर खतिवडा, प्रशान्त भण्डारी तथा सतिश खत्रिको पनि अभिनय रहेको छ । डोलीको प्रदर्शन मिति भने तय गरिएको छैन ।